Qaar ka Mid ah Wufuuda ka Qayb Galaya Shirarka Nabada oo ka Cabanaya Deg Deg iyo Wakhti Xumo – Rasaasa News
Sep 20, 2010 ethiopia, ogaden peace, ONLF, shirar, Somali
Mineapolis, [Sept 20, 2010] – Warar xog ogaal ah oo aan ka helayno qaar ka mid ah wufuudii lagu marti qaaday in ay ka qayb galaan shirarka Nabadaynta ee la sugayo in ay ka dhacaan gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya, ayaa aad waxay uga cabanayaan in aan la siinin wakhti ay ku diyaar garoobaan.
Dadka qurba joogta ee u dhashay degaanka Somalida Ogadeeniya ayaa aad waxay u xiisaynayaan nabad ka dhacda dhulka Somalida Ogadeeniya. Qurba joogta ayaa waxay ka shin tirinaysay xiliga uu dhici doono shirweynaha qaran ee ka dhicidoona gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya.
Qubajoogta, ayaa badankoodu ah dad ka xoogsada dalalka reer galbeedka. Hadii ay dadkani damcaan in ay fasax qaataan waxay u baahan yihiin in ay wargaliyaan masuuliyiinta shirkadaha ay u shaqeeyaan ugu yaraan hal todobaad ugu badnaana laba todobaad.
Xaalada fasaxyada ee dadka aadaya dalalka fog fog ayaa iyadu ah xaalad gooni ah [special case], una baahan in ay helaan wakhti ay cabashadooda fasax ugu gudbisan karaan masuuliyiinta shirkadaha ay u shaqeeyaan.
Hadaba, qaar ka mid ah qurba joogta Somalida Ogadeeniya ee lagu marti qaaday in ay ka qayb galaan shirarka Nabadaynta ayaa waxay aad ug cabanayaan in aan la siin wakhti ay hawlahooda gaarka ah ku dhamaysan karaan.
Qaar ka mid ah dadka diyaarka u ah in ay ka qayb galaan shirkaas, waxay dareemayaan in ay jirto tikhaantikhin aan loo baahnayn iyo deg deg ka socda gudaha.
Shirarka nabada ee la sugayo in ay ka dhacaan gudaha Ogadeeniya ayaa xudun u ah nabad ka dhacda dhulka Somalida Ogadeeniya, una baahan in si habsami ah oo degan ay u dhacaan.
Jiritaanka Kooxda Jwxo-shiil, ayaa ku xidhnaan doonta hanaanka uu u dhaco shirweynaha Qaran ee la filayo in uu ka dhaco dhulka Somalida Ogadeeniya.